Iingcebiso ezi-4 zokuba ngcono "UkuHlala" | Martech Zone
NgoMvulo, nge-9 kaJanuwari, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UHanna Johnson
Ukuba uyafunda Martech Zone, Amathuba okuba umntu othile akukhanyisele kwinto yokuba izakubaluleke ngakumbi kunangaphambili ukufumana ishishini lakho kwezentlalo kulo nyaka. A uphando lwangoku nje siqhubele i- Ukukhulisa imithombo yeendaba Uveze ukuba i-40% yabancinci abenza izigqibo kwishishini abenza izicwangciso zokusebenzisa imidiya yoluntu ngo-2012. I-Business Insanity Radio Talk Show bacebise ukuba bonke abantu abathengisayo banikwe iiakhawunti zabo zenkampani (iTwitter, iFacebook, njl.njl.,
Kukho imbalwa, ukuba ikho, imithetho enzima nekhawulezayo malunga nokusebenzisa iMithombo yeendaba. Umsebenzi wam njengeMarketer yeMidiya yezeNtlalontle Zoomerang, kwaye ngoku SurveyMonkey, kuthetha ukuba ndifunde into okanye ezimbini malunga noko kusebenza kwaye, okona kubaluleke kakhulu, kukungasebenzi. Imfihlo yempumelelo yeMidiya yoLuntu kukuvulelwa ukuzama izinto ezintsha, ukulinganisa iziphumo zakho, kunye nokusebenzisa iimetrikhi ukubona ukuba yeyiphi esebenzayo wena, uphawu lwakho, kunye nabaphulaphuli bakho. Kodwa ndineendlela ezi-4 ezilula zokuba uqalise:
1. Musa ukucinga. Buza
Imfihlelo yokwakha enkulu kwezentlalo ukuhambisa umxholo onomdla, onomdla kubaphulaphuli bakho. Kodwa ungawenza njani umxholo omkhulu ukuba awazi ukuba ngubani abaphulaphuli bakho? Buza! Yenza ifayile uphando olulula kwaye uyithumele kubalandeli bakho, abalandeli, nakubathengi. I-Zoomerang kunye neSurveyMonkey zibonelela ngeetoni zeetemplate zasimahla onokuthi uzenze ngentando ngokongeza imifanekiso, ilogo yakho, kunye nemibala yenkampani.
Buza ukuba ngoobani abathengi bakho, bayisebenzisa njani imveliso okanye inkonzo yakho, kwaye baneliseke kangakanani. Okukhona uyazi malunga nabathengi bakho kunye nezinto abazifunayo, kokukhona uya kuba nakho ukubanikezela ngolwazi abalufumanayo luluncedo kwaye lunomdla.
2. Nyusa, Nyusa, Phakamisa
Ukudala umxholo omkhulu lelona nyathelo libalulekileyo, kodwa linyathelo lokuqala kuphela. Nje ukuba wenze umxholo, kuya kufuneka uwukhuthaze ngokude kwaye ubanzi kangangoko kunokwenzeka. Oko ikukuthi Tweeting malunga nayo, ukuyithumela kwiphepha lakho le-Facebook, kunye namaphepha afanelekileyo eqela le-Linkedin. Khumbula umthetho we-80-20, othi kufuneka uphendule kumxholo wabanye abantu ama-80% exesha, kwaye uphakamise umxholo wakho ngama-20% exesha. Umgaqo wendalo wesithupha-akukho mntu ufuna ukuva ukuzazisa ngokwabo kwi-mumbo jumbo imini yonke.
Kodwa xa uziqhelanisa ungawufiphaza umgca kancinci, kwaye uhamba ngeendlela zombini. Amagqabantshintshi ngebhlog okanye enye yezithuba zabalandeli bakho kuFacebook, kwaye ukuba kufanelekile, faka ikhonkco kwindawo yakho. Re-tweet ulwazi abathe abanye abantu kwishishini lakho bathe, ukuba ayilulo ngqo ukhuphiswano kwaye luya kuba luncedo kubathengi bakho. Jonga iiMpendulo ze-Linkedin, kwaye xa umntu enengxaki apho inkonzo okanye imveliso inokunceda ukuyisombulula, mnike. Qiniseka nje ukuba ubuyisa inceba ngokubeka izimvo, ukuphinda uthumele umyalezo nge-tweet, kwaye uthande isabelo sakho esifanelekileyo (80%).
3. Intengiso ephumayo yiSoo 2011
Ezi ntsuku zizonke malunga nokuThengiswa okungenayo, ekufuneka kuvele ngokwendalo wakube ufundile amanyathelo 1 no-2. Ngokubonelela abathengi bakho ngolwazi olunomdla, olufanelekileyo, kwaye ulukhuthaze ngamajelo alungileyo, ngekhe kuthathe ixesha elide ngaphambi kokuba uzibonakalise njengengcali ethembekileyo kwicandelo lakho. Abantu baya kuza kwibhlog yakho yenkampani ezenzekelayo, hayi xa befuna ukuthenga imoto, kodwa xa befuna ukwazi ukuba bathini abantu ngeemodeli zika-2012. Baza kuqala ukuchitha ixesha elininzi kwindawo yakho, kwaye baqhelane nokuyijonga kuba bayazi ukuba uthumela rhoqo (nudge nudge, wink wink). Ukuthengisa kwakho kuya kulungelelanisa nexesha labantu abaza kwindawo yakho, kwaye oko kuya kulungelelanisa nendlela owenza ngayo amanyathelo 1 no-2.
4. Sukuzoyika izinto eziGwenxa: Sebenza ngokukuko!
Uninzi lwabenzi bezigqibo ze-SMB endithetha nabo boyika ukuba ukuya kwezentlalo kuya kubavulela kuzo zonke iintlobo zolwazi olubi. Ndikhe ndanamava oku kwesandla sokuqala-akunakudlula iveki apho kungabikho mntu uthengayo kwiphepha lethu likaFacebook, nokuba lihambelana ngqo nemveliso yethu okanye akunjalo. Oku kunokuba yinto eyoyikisayo, ndiyazi, kodwa kuya kufuneka ukhumbule ukuba abathengi bayayixabisa ingozi oyithathayo ngokuzibeka phaya kanjalo, kwaye baya kukuhlonela ngenxa yayo. Ekupheleni kosuku, baya kuyikrokrela ngakumbi inkampani engakhange ithathe inxaxheba kwezoluntu kunaleyo ibamba ubushushu kwiphepha labo le-Twitter. Kwaye kubo bonke abathengi abangenelisekanga, sinabo aba-5 banelisekile ngokuthumela ulwaneliseko lwabo kwimveliso yethu. Amagqabantshintshi abo aluncedo ngakumbi kubhrendi wethu kunalawo angathandekiyo.
Khawukhumbule ukujongana nengxelo ngexesha elifanelekileyo, ngendlela elungileyo. Umthengi usenokungasoloko elungile, kodwa nakuphi na ukukhathazeka abavakalelwa kukuba kufanelekile, yamkele loo nto, kwaye ubonelele ngamanyathelo amanyathelo anokunceda ukulungisa imeko. Ayizizo zonke iimpendulo ezingayi kuba ntle! Xa umntu ekubhatala uncoma, mbulele ngayo, kwaye ubabuze ukuba bangathanda na ukwenza ibali lempumelelo yomthengi nawe. Bafumana ilizwi labo (kunye negama) phaya, ufumana isincomo sabo sendalo, kwaye wonke umntu uyaphumelela.
Ndiyathemba ukuba ezi ngcebiso ze-4 zikunceda ukuba uqalise kwimfuno yakho yokuba nentlalontle! Nceda uphawule ingxelo yakho, ezinye iingcebiso, okanye nayiphi na imibuzo onayo! Ukonwaba!
tags: izinto ezilungileyoImidiya yokuncokolaezona ndlela zokuzonwabisa zilungileyoiingcebiso zoluntuiingcebiso zentlalo
Jan 11, 2012 ngo-12: 35 PM
Molo Hanna! Siyavumelana ngokupheleleyo namanqaku owenzileyo apha. Imidiya yokuncokola liqonga elihle lamashishini okwakha ulwazi malunga negama kunye nokufezekisa ezinye iinjongo abanokuba nazo. Ukuyisebenzisa ngokufanelekileyo nangona kunjalo, kubonakala ngathi ngumsebenzi onzima kwabanye. Silindele ukuba unyaka omtsha uzise iindlela ezintsha zokusebenzisa imidiya yoluntu. Amashishini kufuneka acetyiswe kakuhle ukuba akhwele ebhodini ukuze abe kwimeko yokufumana inzuzo. Ngapha koko Iposti enkulu!
Jan 12, 2012 ngo-4: 53 PM
Inbound yile nto kanye besiyicwangcisile kulo nyaka. Sibhala nje qhinga lethu losasazo lwasentlalweni kwaye ndiyifumene iluncedo kakhulu le posti, ke bendicinga ukuba ndiza kukuxelela njengoko ndithanda abantu ukuba banike izimvo kwizithuba zam!
Ngokuqinisekileyo ndiza kuthatha ingcebiso yakho malunga nokujonga abaphulaphuli bethu. Ingcinga entle.